Mpanamboatra sy mpamatsy solosaina vovoka Powder - Orinasa fametahana vovoka China
Vovon-tsarimihetsika volo tarehy manaparitaka ny farany ambany amin'ny rindrina fanakatonana
Fampidirana:Vovon-tsarimihetsika volo tarehy manaparitaka ny farany ambany amin'ny rindrina fanakatonana. Masinina nohitsakitsahana no nanamboarany azy. Azonao ampiasaina amin'ny kabinetra endrika endrika amerikana. Ny fahaiza-mavesatra manodidina ny 25 KGS sy ny bisikileta mihoatra ny in-50 000. Ny endri-javatra dia ny slide roller miaraka amin'ny pads fandanjalanjana, ny fikosehana malefaka miaraka amin'ny tabataba ambany, ny fiasa mifandraika amin'ny tena, ny paikady fijanonana mba hisorohana ny firafitra mihodina. Ny haavo dia mampiasa teknolojia mandroso, tsy misy poizina tontolo iainana, mahomby fanoherana ny harafesina, fanoherana ny harafesina.
Model No .: US02A
604 Series Eoropeana farany ambany fametahana volo mihosotra vita amin'ny volo
Fampidirana:604 Series Eoropeana farany ambany mitaingina volo vita amin'ny volo vita amin'ny volo no karazan-tsarimihetsika mora indrindra. Masinina nohitsakitsahana no nanamboarany azy. Afaka ampiasaina amin'ny karazan-drakitry ny fanaka rehetra. Ny fahafaha-mavesatra manodidina ny 25 KGS sy ny bisikileta mihoatra ny in-50 000. Ny endri-javatra dia ny slide roller miaraka amin'ny pads fandanjalanjana, ny fikosehana malefaka miaraka amin'ny tabataba ambany, ny fiasa mifandraika amin'ny tena, ny paikady fijanonana mba hisorohana ny firafitra mihodina. Ny haavo dia mampiasa teknolojia mandroso, tsy misy poizina tontolo iainana, mahomby fanoherana ny harafesina, fanoherana ny harafesina.
Model No .: YA-01
FGV Series ambany mametraka ny vovon-drakitra manakatona firakotra vatosoa amerikana atsimo
Fampidirana:FGV Series ambany mitaingina vovoka famonoana vovo-dronono any Amerika atsimo no karazana slide drawer mora indrindra. Masinina nohitsakitsahana no nanamboarany azy. Afaka ampiasaina amin'ny karazan-drakitry ny fanaka rehetra. Ny fahafaha-mavesatra manodidina ny 25 KGS sy ny bisikileta mihoatra ny in-50 000. Ny endri-javatra dia ny slide roller miaraka amin'ny pads fandanjalanjana, ny fikosehana malefaka miaraka amin'ny tabataba ambany, ny fiasa mifandraika amin'ny tena, ny paikady fijanonana mba hisorohana ny firafitra mihodina. Ny haavo dia mampiasa teknolojia mandroso, tsy misy poizina tontolo iainana, mahomby fanoherana ny harafesina, fanoherana ny harafesina.
Model No .: YA-02
86mm vatasarihana mpantsaka mivelatra fisoritana boaty vy
Fampidirana:86mm haavo vatosoa tontonana fisoritana loaka boaty dia karazana rafitra mpantsaka mora indrindra. Masinina nohitsakitsahana no nanamboarany azy. Afaka ampiasaina amin'ny karazan-drakitry ny fanaka rehetra. Ny fahafaha-mavesatra manodidina ny 25 KGS sy ny bisikileta mihoatra ny in-50 000. Ny endri-javatra dia ny slide roller miaraka amin'ny pads fandanjalanjana, ny fikosehana malefaka miaraka amin'ny tabataba ambany, ny fiasa mifandraika amin'ny tena, ny paikady fijanonana mba hisorohana ny firafitra mihodina. Ny haavo dia mampiasa teknolojia mandroso, tsy misy poizina tontolo iainana, mahomby fanoherana ny harafesina, fanoherana ny harafesina.
Model No .: YA-03A86
Fantsom-boatavo vita amin'ny vy 118mm (sary mihetsika mifono vovoka)
Fampidirana:Ny slide slide boaty vita amin'ny metaly 118mm (slide slide mifono vovoka) no karazana rafitra mpantsaka mora indrindra. Masinina nohitsakitsahana no nanamboarany azy. Afaka ampiasaina amin'ny karazan-drakitry ny fanaka rehetra. Ny fahafaha-mavesatra manodidina ny 25 KGS sy ny bisikileta mihoatra ny in-50 000. Ny endri-javatra dia ny slide roller miaraka amin'ny pads fandanjalanjana, ny fikosehana malefaka miaraka amin'ny tabataba ambany, ny fiasa mifandraika amin'ny tena, ny paikady fijanonana mba hisorohana ny firafitra mihodina. Ny haavo dia mampiasa teknolojia mandroso, tsy misy poizina tontolo iainana, mahomby fanoherana ny harafesina, fanoherana ny harafesina.
Model No .: YA-03A118
Sarin-tsarimihetsika boaty vy 150mm
Fampidirana:Ny slide slide boaty vy 150mm dia karazana rafitra mpantsaka mora indrindra. Masinina nohitsakitsahana no nanamboarany azy. Afaka ampiasaina amin'ny karazan-drakitry ny fanaka rehetra. Ny fahafaha-mavesatra manodidina ny 25 KGS sy ny bisikileta mihoatra ny in-50 000. Ny endri-javatra dia ny slide roller miaraka amin'ny pads fandanjalanjana, ny fikosehana malefaka miaraka amin'ny tabataba ambany, ny fiasa mifandraika amin'ny tena, ny paikady fijanonana mba hisorohana ny firafitra mihodina. Ny haavo dia mampiasa teknolojia mandroso, tsy misy poizina tontolo iainana, mahomby fanoherana ny harafesina, fanoherana ny harafesina.
Model No .: YA-03A150